Ogaden News Agency (ONA) – Bahda Warfaafinta JWXO & Gudoomiyaha JWXO oo Kulmay.
Bahda Warfaafinta JWXO & Gudoomiyaha JWXO oo Kulmay.
Posted by Dulmane	/ February 6, 2019
Waxaa maanta oo Arbaco ah magaalada Jigjiga kaqabsoomay Shir ahmiyad badan lahaa oo udhexeeyay Bahda Warfaafinta JWXO iyo Gudoomiyaha JWXO Adm Maxamed Cumar Cismaan.
Kulankan oo lagaga hadlayay sidii loo hormarin lahaa Warfaafinta JWXO ayaa qabsoomay xafiiska Gudoomiyaha JWXO oo Xarunta Dulqabow kuyaala, waxaana kulanka Shir gudoominayay Gudoomiyaha JWXO mudane General Maxamed Cumar Cismaan.
Gudoomiyaha Hogaanka Warfaafinta JWXO Mudane Maxamed Ibraahim Mursal ayaa warbixin dheer oo uu kaga warbixinayay xaalada HWF siiyay Gudoomiyaha, wuxuuna Hogaanku sifiican sharaxaad uga bixiyay xaalada warbaahinta JWXO ee gudaha iyo dibadaba.
Sidoo kale howl-wadeenka Warfaafinta JWXO ee Jigjiga kusugan ayaa dhankooda Gudoomiyaha usoo jeediyay wixii talo ah oo ay hayaan si warbaahinta JWXO lootayeeyo halka ay joogtana looga sii saro mariyo.
Gudoomiyaha JWXO Mudane Admiral Maxamed Cumar Cismaan ayaa bahda Warfaafinta JWXO uga mahad celiyay howlaha muhiimka ah ee shacabkooda ay uhayaan iyo doorka saxaafadeed ee ifaya ee gude iyo dibadba ay kaqaateen. Si howlaha Warfaafinta loo hormariyo.
Sidoo kale Gudoomiyaha ayaa sheegay in uu garab istaagayo Bahda Warfaafinta oo habeen iyo maalinba utaagan sidii ay shacabkooda Warar sugan uga haqabtiri lahaayeen.
Bahda Warfaafinta JWXO ee gudaha Ogadenia kusugan ayaa dhankooda balan qaaday in ay sare uqaadaan howlaha Warfaafinta inta ay awoodaan, wuxuuna shirku kusoo gabagaboobay si qurux badan.